काठमाडौंमा ‘सेमरिन मुला माया’
तराईबाट प्रदर्शन यात्रा थालेको तामाङ कथानक फिल्म ‘सेमरिन मुला माया’ (मनकै छ माया) आउँदो शनिबार राजधानीमा प्रिमियर शो हुँदैछ ।
हास्यव्यंग्यकै गाईजात्रा !
गाईजात्रा । हास्यव्यंग्य कलाकारहरूका लागि दसैं बराबर । तर, यो महान् चाड सबै हास्य कलाकारले यस पालि मनाउन पाएनन् । भन्छन्— सधैँ महोत्सव गर्दै आएको ठाउँ पाइएन, अर्को खोज्नलाई समय घर्किसकेको थियो । यसलाई उनीहरूले गाईजात्राकै गाईजात्रा भएको रूपमा लिएका छन् ।
चुनौतीपूर्ण कथा, दर्शकले रुचाउने आशा
सुरुवाती नाम ‘रोजी’ फेरेर ‘रोज’ बनेको र भदौ २२ मा रिलिज हुन लागेको फिल्मले सुटिङ अवधिदेखि नै झमेला बेहोर्नुपर्‍यो । प्रेमिका हत्याका आरोपी प्रेमीको सत्यकथा भनिएकोले र नामका कारण पनि यस्तै प्रकृतिको रोजी महर्जन हत्याकाण्ड र उनका परिवार यसबारे सचेत भए ।
थारू भाषाको फिल्म ‘भुरभुरा रहर’ दसैंमा प्रदर्शन हुने तरखरमा छ । मूलधारको नेपाली फिल्ममा जत्तिकै लगानी रहेको भनिएको फिल्मको सुटिङमा अत्याधुनिक क्यामेरा र ड्रोनसमेत प्रयोग गरियो । मुख्य कलाकारहरू इन्द्र चौधरी र नायिका भीष्माकुमारी चौधरीले राम्रै पारिश्रमिक लिए ।
पछिल्लो समय तामाङ भाषाको फिल्म निर्माण र प्रदर्शनको क्रम बढदो छ । केही अघि मात्रै भक्तपुरको बाराही हलमा अजय स्याङतानको ‘आप्लेङला नाम्सा’ (मितबाको गाउँ) देखाइएको थियो ।
दिनेश र सिमाको तीज कोसेली 'पाउजु बरी लै...' [भिडियोसहित]
लोकप्रिय कलाकार दिनेश थापा र सिमा भण्डारीले 'पाउजु बरी लै...' तीज कोसेली पस्केका छन् । नेपाली नारीहरुको ठूलो पर्व हरितालिका तीजलाई मध्यनजर गरेर कलाकारद्वय थापा र भण्डारीले मौलिक गीत हालै बजारमा ल्याएका हुन् ।
जीवन अर्थ्याउन कपाल र काइँयो
सम्बन्धको खास अर्थ कस्तो हुन सक्छ ? काइँयो र कपाल जस्तो ? यी दुई वस्तुलाई मानिसको जीवनसँग जोडिएर आउने व्यक्तिगत, सामाजिक या सांस्कृतिक सम्बन्धको गहिराइ अथ्र्याउने हिसाबले कसरी हेर्न सकिन्छ ?
बेपत्ताहरूलाई सम्झिँदै नाटक
श्रीमान् बेपत्ता पारिएपछि सरिता उनलाई खोज्न धरैतिर धाइन् । श्रीमान्ले पठाएको नक्साका आधारमा उनलाई खोज्दै हिँडेकी सरिताले यो यात्राका क्रममा जीवनको नयाँ अध्याय भेटाएकी छन् । उनकी छोरी ठूली भएकी छन् र कुरा बुझ्ने पनि ।
थिमिमा नाच्दै छन् भैरव
सुरुमा उनीहरू बाजाको तालमा सुस्तरी नाच्दै थिए । जब रिदमले उचाइ लियो, पाँच जना भैरव (भैल:) को शारीरिक हाउभाउ बदलिँदै गयो । रौद्र रूपमा उनीहरू यसरी देखा परे, मानौं दर्शकहरू डराएर भागिहाल्छन् । तर, यति बेला थिमिमा भैरवलाई हेरेर रमाउनेहरूको भीड लागिरहेको छ ।
कला, साहित्य र संस्कृतिको प्रयोग मनोरञ्जनमा मात्र नभई समाज रूपान्तरणका लागि हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बताएका छन् ।